Hirshabeelle oo eedeysay wasiirro ka tirsan Xukuumadda Rooble | KEYDMEDIA ONLINE
Guddi heer wasiirro ah oo loo saaray xal u helidda fatahaadaha uu wado Wabiga Shabeelle ayaa soo saaray war saxaafadeed ay eed kulul ugu jeediyeen Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Xil-gaarsiinta Soomaaliya.
JOWHAR, Soomaaliya - War qoraal ah oo ka soo baxay Maamul goboleedka HirShabeelle ayaa lagu sheegay in fadaahado hor leh ku wajahan yihiin degaannada Maamulka, waxayna Wasiirada Maaliyadda iyo Qorsheynta ee Xukuumadda Xil-gaarsiinta ku eedeeyeen in ay masuul ka yihiin wax ka qabasha la’aanta arrintaan.
Warka ka soo baxay HirShabeelle, waxaa lagu xusay in Dowladda Fadaraalka la weydiiyay sii deynta lacag uu bixiyay Bankiga adduunka oo loogu tala galay in looga hor tago fatahaadaha Wabiga Shabeelle, lacagtaasna uu RW Rooble amray bishii Janaayo ee sanadkaan, hayeehsee ee caqabad ku noqdeen Wasiirada Maaliyadda iyo Qorsheynta ee Xukuumadda.
“Waxaa wax laga xumaado ah in Wasiirka Maaliyadda uu caqabad ku noqdo fududeynta iyo sii deynta daqaalaha uu bixiyay bankiga addunka ee wax looga qaban lahaa ka hor tagga fatahaadaha”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay HirShabeelle.
Roobab xooggan oo ka da’ay buuraleyda Itoobiya ayaa sababay inuu buux dhaafo Wabiga Shabeelle, kaas oo aan dayac-tir helin muddo dheer, wuxuuna ku fatahay ilaa 15 tuulo oo ay noolaayeen ku dhawaad Sideed kun oo qows oo dhamaantod ka bara kacay.